यस लेखमा हामी "संस्थाले" को अवधारणा बारे कुरा हुनेछ। शब्द के छ मतलब सक्नुहुन्छ संस्थाले कस्तो छ र? अन्य छैन, एक संस्थाका रूपमा जो मानिसहरू उच्च शिक्षा प्राप्त - केही संस्थाले ठान्छन्। तर यो साँचो हो। हाम्रो कार्य - आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न, संस्थाहरू को सबै प्रकार बारेमा पाठक बताउन। आखिर, कुनै कुरा के यो स्थान (अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य कुनै पनि), प्रत्येक जो आफ्नो काम कार्य गर्दछ।
त्यहाँ विभिन्न तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने शब्दहरू हुन्। अवधारणा को खुलासा गर्न अघि बढ्नु अघि, तपाईं शब्द "संस्थाले" ध्यान गर्नुपर्छ। संस्थान के हो, हामी तल वर्णन। नै, अवधारणा केही गतिविधिहरु मा लगे र सेवाहरूको सार्वजनिक एक स्पष्ट परिभाषित सूची प्रदान गर्दछ छ संगठन एक प्रकारको बुझाउँछ।
यो शिक्षाको संस्था हुन छैन भनेर टिप्पण लायक छ। यो अवधारणा पहिले भन्दा अक्सर यस्तो संस्था को नाम निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छ। अर्थशास्त्र, कानून, स्वास्थ्य हेरविचार, व्यापार र धेरै अन्य: तर अब शब्द सफलतापूर्वक जीवनको विभिन्न क्षेत्रहरू माईग्रेट छ। अब, शिक्षा र विकास को स्तर देखाउन मानिसहरू अक्सर कुनै पनि संगठन संकेत यो अवधि प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई हाम्रो समाजमा अवस्थित संस्थाहरू प्रकार को केही जाँचौं।
संस्थाहरु को प्रकार
त्यसैले, एक संस्थाका रूपमा केही क्षेत्रमा, कि संस्थाले के समाजलाई लाभ ल्याउँछ गरिरहेको छ? सामान्यतया, यस्तो संगठन निम्न क्षेत्रमा काम:
शिक्षा। यहाँ सबै यी संस्थाहरू लामो समय को लागि अस्तित्व मा गरिएको छ, किनभने एकदम बुझ्ने छ। र यो मान्छे अक्सर यो अवधारणा विचार यो अर्थमा छ। यी व्यक्तिहरूलाई तालिम र एक उपाधि प्राप्त जुन सबै ठाउँमा समावेश।
विज्ञान। यो पहिलो गर्न अवधारणा मा नजिक छ, तर अझै पनि त्यहाँ एक महत्वपूर्ण फरक छ। यस्तो ठाउँमा सिक्न छैन, र अन्वेषण मा, त्यसपछि त्यहाँ वैज्ञानिक संगठन एक प्रकारको छ।
समाज। यहाँ यो अन्य पक्ष बाट भेट्नुपर्छ गर्न, शब्द को सामान्य धारणा देखि प्रस्थान गर्न आवश्यक छ। विवाह कुरा गर्दा यो अर्थमा संस्थान प्रयोग गरिन्छ। समाज को परिवार एकाइ - यो पनि संगठन एक प्रकारको छ। त्यसैले, यो पनि ठीकै संस्थान सकिन्छ।
ऐन। यस क्षेत्रमा, हामी पनि अक्सर यो अवधि रक्षा र जीवन र मानव अधिकार संरक्षण गर्न कुनै पनि संरचना संकेत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
सिद्धान्त, यस अवधारणा उद्देश्य छ र एक विशेष कार्य वा धेरै कार्यहरु गर्न प्रयोग गरिन्छ कि कुनै पनि संरचना उल्लेख लागू गर्न सकिन्छ।
सुविधाहरू, लाभ र बेफाइदा
त्यसैले, हामी "संस्थाले" को अवधारणा संग व्यवहार गर्नुभयो छन्: एक शब्द मतलब के, पाठकहरूलाई सिके। अब हामी विचार र यी संरचना मध्ये हुनुको आवश्यकता कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भनाइको अर्थ? प्रत्येक संस्थाले आवश्यकताहरु को एक निश्चित सूची छ भन्ने तथ्यलाई। उदाहरणका लागि, आचरण, दायित्व र कानुनको शासन। यो घटना को सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू को व्याख्या मा रोक लायक छ। एक हात मा, सबै प्रतिबन्ध सबैका लागि केही असुविधा बनाउने छन्। अन्य मा - एउटै नियम र आवश्यकताहरु हाम्रो जीवन थप सुरक्षित बनाउन।
अवधारणा विवरणहरू व्याख्या गर्न, सबै को उदाहरण हेरौं। तपाईं कुनै अधिकार, त्यसैले, ट्राफिक सदस्य छन्। एक हात मा, तपाईं, मेशिन अवस्था अनुगमन यातायात नियम पालन गर्न छ। तर अर्कोतर्फ, यी नियमहरू तपाईं र तपाईंको परिवारलाई पैदल र सवारी मा शहर सडकमा मार्फत सुरक्षित सार्न अनुमति दिन्छ।
तर अझै पनि, शिक्षा को संस्थान दिइएको शब्द को लागि सबै भन्दा राम्रो-स्थापित र परिचित प्रतीक हो। यस क्षेत्रमा, त्यहाँ धेरै फरक चरणमा छन्। शिक्षा क्षेत्रमा संस्थाले कुनै पनि संस्थाले छ भन्ने तथ्यलाई - बाल सदन सुरु हुने र स्नातक स्कूल खत्म। तपाईं प्रकार यी संस्थाहरू वितरण भने, कि वर्गीकरण हुनेछ:
पूर्व-स्कूल छ वर्ष सम्म बच्चाहरु को शिक्षा मा संलग्न छन् कि सबै प्रतिष्ठानबाट छन्। यो kindergartens, क्लब, स्कूल र समान संस्थाहरु को प्रारम्भिक विकास। यी संस्थाहरूको बाध्यकारी छैन। तिनीहरूले मात्र अनुरोध मा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रारम्भिक, प्राथमिक, माध्यमिक: सामान्य शिक्षा संस्थाहरू तीन प्रशिक्षण चरणमा सबै विद्यालय मानिन्छ छन्। यो पनि gymnasiums, lyceums र भुक्तानी कुलीन विद्यालय समावेश छ। कारण माध्यमिक शिक्षा हाम्रो देशमा अनिवार्य छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, बच्चाहरु प्रस्तुत संस्थाहरू एक धाउन आवश्यक छन्, र अन्त मा शिक्षा मा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न।
ती संस्थाहरू कि अनाथ, किशोर delinquents, विकलांग बच्चाहरु, सामान्य मा काम, जो प्रशिक्षण लागि विशेष अवस्था आवश्यक ती समावेश गर्न विशेष संगठन। व्यावसायिक संस्थाहरू स्कूल पूरा गर्ने पुरानो व्यक्तिहरूलाई सामना। यो विश्वविद्यालय र स्नातक स्कूल, व्यावसायिक र प्राविधिक विद्यालय बाट सुरू हुने, सबै संस्थाहरू पनि समावेश छ। प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य छैन। तर आजको समाजमा अस्तित्व उहाँलाई बिना असम्भव देखिन्छ।
शैक्षिक संस्थाहरू को प्रकार
व्यक्ति को सोख र चासो आधारमा आफूलाई के दिशा मा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त गर्न छनोट। त्यहाँ यस्तो पलिटेक्निक संस्थान, चिकित्सा शैक्षिक, कानुनी, र धेरै अन्य रूपमा संस्थाहरू विभिन्न प्रकारका छन्। यसलाई ध्यान दिएर निर्देशन को एक छानेर अघि आफ्नो क्षमता विश्लेषण गर्नुपर्छ। केही रोक्छ हुनत एक व्यक्ति दुई वा उच्च शिक्षा बढी प्राप्त गर्न। तर तिनीहरूलाई अलग्गै, त्यहाँ पनि विकसित अध्ययन को लागि संस्थान छ। यसलाई पहिले नै काम स्थिति कब्जा, तर छुट्टी वा श्रेणी वृद्धि गर्न चाहने, आफ्नो सीप सुधार जसमा एक संस्थाले छ।
विश्व समुदाय, त्यहाँ पनि सबै देशहरूमा द्वारा पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय छौं कि संस्थाहरू छन्। यी संस्थाहरू छन्:
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष।
एसियाली विकास बैंक र धेरै अन्य।
रूपमा लेख बाट देख्न सकिन्छ, शब्द "संस्थाले" बरु व्यापक र बहुमुखी छ। र तपाईं केवल एक संकीर्ण अर्थमा शब्द स्वीकार गर्न सक्दैन।
संसारमा सबै भन्दा ठूलो झरना: शीर्ष 6
पूर्व-उपाधि अभ्यास - एक सफल क्यारियर सुरु
SSMU, कलेज - भविष्यमा चिकित्सा कामदारहरूको लागि एक राम्रो विकल्प
चेबोकसारी विश्वविद्यालयहरु: शीर्ष-10 मूल्याङ्कन एजेन्सीहरू सूची
"यस Sims 3" को लागि कोड: आनन्द र पैसा को स्कोर लागि
एनालग "Festal" सस्ता: नाम, मूल्य। विकल्प "festal": समीक्षा
युरोपेली म्यान्टिस: वासस्थानमा, रंग, फोटो
स्टेक - यो के हो र यो कसरी खाना पकाउनु
क्वालालम्पुर - मलेशिया हृदय